U-Andrey Udalov indodana kaMaria Mironova, umzukulu kaAndrei Mironov - isithombe, biography, impilo yomuntu siqu, Instagram
U-Andrei Udalov (umzukulu ka-Andrei Mironov) - umbukiso omusha we-cinema waseRussia
Kungenzeka yini ukudlulisela ithalenta ngefa? Uma ubheka imindeni yomdlali odumile, uqala ukukholelwa ngokuzikholelwa ekubeni khona kwegesi ekhethekile lobuciko. Esinye sezibonelo ezicacile eziqinisekisa lokhu kucatshangelwa nguMakhosi kaMaronov. Ngokuphambene nenkolelo evamile, umlingisi odumile u-Andrei Mironov akazange abe yiphayona lesikhulu ngendlela yakhe: abazali bakhe u-Alexander Menaker noMaria Mironova babengabaculi be-pop. Ezinyathelweni zikayise wahamba nendodakazi yobuntu obuningi, uMaria Mironova, osengomunye wabadlali abathandwayo kakhulu emidlalweni yaseshashalazini yaseRussia kanye ne-cinema. U-Andrey Udalov - indodana kaMaria Mironova, naye wakhetha indlela yomdlali. Umculi we-novice akawazi kahle umphakathi jikelele njengezihlobo zakhe ezidumile. Kodwa usevele enezinkanyezi kumafilimu amaningana futhi ngentshiseko ikwazi ukuhlola isiteji sezemidlalo. Uma ingoma yomculi kuyiqiniso, le nsizwa ilindele udumo olukhulu. Ngaphezu kwalokho, kukhona amahemuhemu okuthi u-Udalov ungumzukulu hhayi ku-Andrei Mironov kuphela, kodwa no-Yuri Yakovlev. Ku-biography, impilo yomuntu siqu, ubudlelwane nentombazane (isithombe esivela ku-Instagram ngezansi) ka-Andrei Udalov futhi ukhulume nalesi sihloko.
Andrey Udalov-Mironov: biography nokuphila komuntu womdlali omncane
Namuhla igama likaAndrei Udalov emithonjeni yabezindaba livame ukukhulunywa ngaye ngomongo wokuthi nguye yedwa indodana kaMaria Mironova futhi, ngokufanayo, umzukulu kaAndrei Mironov. Kodwa uma ukholelwa ingxoxo yophiko lomama, maduzane lesi simo sizoshintsha. UMaria Mironova uthi indodana yakhe u-Andrei ayibonwanga nje ngokungafani nomkhulu odumile, kodwa nethalenta lakhe. Futhi uma insizwa ibonisa ukukhuthala nokuzinikezela, cishe kungenzeka ukuthi maduzane bazokhuluma ngaye. Ngakho-ke, siphakamisa ukuthi sifunde okunye mayelana ne-biography nokuphila komuntu we-actor osemncane u-Andrei Udalov-Mironov.
Amaphuzu avela ku-biography nokuphila komuntu we-actor osemncane u-Andrei Udalov-Mironov
Indodana yakhe yedwa, uMaria Mironova, wazalwa ngo-1992, engumfundi oneminyaka engu-19 ubudala weSchool School Theater. B.V. Shchukin. Wakhetha ukubiza u-Andrey owokuqala ngokuhlonipha ubaba wakhe, owambeletha umzukulu wakhe esefile kakade. Naphezu kokuthi uMariya wayethandane nomsebenzi wezeThishini u-Igor Udalov, lo mfana ubhalisiwe ngaphansi kwegama lomama wakhe. Lapho u-Andrei eneminyaka engu-12 ubudala, uMaria wayishintsha igama lakhe esuka eMironov waya e-Udalova, nakuba ngaleso sikhathi wayesehlukanisile nomyeni wakhe wokuqala. Kamuva, le ndaba yaba yisenzakalo samahemuhemu okuthi u-Igor Udalov akayena uyise ka-Andrei. Ukukhulelwa kuka-Andrew kwakuvame ukuwenziwa ngugogo nomama. Umama osemncane wazinikela ngokuphelele ekufundeni nasemisebenzini yakhe, ngakho ubuhlobo babo bubuhlungu. Ukuthula nokuqonda phakathi kwendodana nomama beza lapho u-Andrei enquma ukuba ngumdlali we-actress. Nakuba ekuqaleni u-Udalov wangena eNyuvesi Yezokuphatha Kahulumeni waseMoscow, ngonyaka owalandela wawayeka waba umfundi we-"Pike" odumile. Namuhla u-Andrey uye wabamba ifilimu emafilimu angu-6 futhi wenza izenzo endaweni yesehlakalo. EB Vakhtangova.
Indodana kaMary Mironova u-Andrew Udalov, umzukulu kaAndrei Mironov noYuro Yakovlev?
Isikhathi sokuqala ukuthi indodana kaMaria Mironova, u-Andrei Udalov angabi umzukulu hhayi ku-Andrei Mironov kuphela, kodwa no-Yuri Yakovlev, baqala ukukhuluma eminyakeni engaba ngu-90. Iqiniso liwukuthi ukuba intombazane eneminyaka engu-17 ubudala, uMaria wahlangana no-Anton, indodana yomsunguli odumile waseSoviet u-Yuri Yakovlev. Kuyinto inkohliso yokuthi abantu abasha babebathandana kakhulu futhi bahlala ndawonye. Ngokusobala kulesobudlelwane e-Masha futhi kwakukhona umntwana owabeletha igama lakhe uyise. Kodwa uthando oluqinile phakathi kukaMaria no-Anton aluzange lwenzeke, futhi ngemuva kokunye ukuthuka kwentombazane ishiye endlini yomthandi wayo. Ngokusho kwamahemuhemu, ngaleso sikhathi wayevele esekhulelwe, kodwa wakhetha ukufihla lolu lwazi ku-Yakovlev. Futhi ukuthi ingane yayineyise, u-Masha wavuma ukushada nomuntu owayemthanda isikhathi eside - umdayisi omkhulu wezeTvishini u-Igor Udalov.
Umzukulu ka-Andrey Udalov-Yuri Yakovlev noma u-Andrei Mironov?
Kuyaphawuleka ukuthi uMaria Mironova akaphenduli ngale nguqulo futhi ngazo zonke izindlela angalahla uxhumano no-Anton Yakovlev. Kwesinye sezimpendulo, wathi ngokuhlekwa ukuthi kungenzeka ukuthi ubaba wakhe abe nguVV. Putin. Amahemuhemu amasha athi u-Andrei Udalov wamukelwa yindodana engekho emthethweni ka-Anton Yakovlev, ngemuva kokuthi umdlali osemusha eqala ukwenza amafilimu. Abalandeli abaningi baphawula kulo ukufana hhayi ngo-Andrei Mironov, kodwa no-Yuri Yakovlev. USam Udalov akaphazi ngalesi sihloko. Uqhubeka nobudlelwano noyise u-Igor Udalov futhi akaphazamisi nganoma iyiphi indlela ngokusebenza kukaYakovlevs.
Umqambi wokuqala u-Andrey Udalov nentombi yakhe: isithombe esivela ku-Instagram
Ukubukeka kwangaphandle u-Udalova nomkhulu wakhe odumile-u-Andrew Mironov akazange ahlonishwe abezindaba. Izincwadi eziningi zaqala ukucabangela ngalesi sihloko, ziveza amanoveli amasha angabikho. Eqinisweni, u-Andrey Udalov, ngokwamukelwa kwakhe, uhloniphekile. Sekuyiminyaka engu-7 manje uhlangabezane nentombazane uKsenia. Abantu abasha bahlangana ngesikhathi lapho le nsizwa ingacabangi ngisho nangomsebenzi womculi.
Kuyini ubuhlobo bomdlali we-novice u-Andrei Udalov nentombi yakhe, isithombe
Zibucayi kangakanani isimo sengqondo somdlali omncane u-Andrei Udalov nentombazane yakhe uKsenia? Impendulo yalo mbuzo ingatholakala esithombeni ku-Instagram. Umlingisi akanalo ikhasi kule nethiwekhi ethandwayo futhi izithombe zakhe (kufaka phakathi lezo ezabelwana nentombazane) zikwabiwa ngumama kaMaria. Ngokusobala, lo mbhangqwana uhle, futhi umculi odumile ujabule ukukhetha indodana. Mayelana ne-interview, u-Andrei Udalov (indodana kaMaria Mironova) uyavuma ngokucacile uthando lwakhe ngo-Xenia, embiza ngokuthi ngumkakhe wesikhathi esizayo. Njengamanje abantu abasha bahlala ndawonye, ​​kodwa abahlezi umshado okwamanje. Lezi ambalwa nje amaqiniso avela ku-biography nokuphila komuntu womzukulu u-Andrei Mironov, futhi mhlawumbe no-Yuri Yakovlev. Okulandelayo ukukhethwa kwezithombe zomdlali we-novice nomndeni wakhe.
Ukuphila komuntu siqu kaDmitry Nagiyev. Izithombe zabafazi, izigqila nendodana
Bangaki abafazi nezingane abenza uDmitry Khvorostovsky?
Ukuphila komuntu siqu ka-Oleg Tabakov
Uyabona ukuthi ubani osesithombeni? Namuhla embhedeni wale ndodakazikazi, kuphela u-Miss Russia kuphela
UMegan Markle, umakoti kaHarry Harry, washintsha kanjani ngaphambi nangemva kokuhlinzwa kwepulasitiki
UMaria Shukshina, impilo yomuntu siqu
I-Creamy Chocolate Caramel
Unyaka wokuqala wokuphila kwengane
Lapho le ntombazane ishiya umfana, kuthiwani manje?
Okufanele ukwenze uma isifiso socansi selahlekile
Amafutha omifino, izakhiwo eziwusizo
Pizza yaseTurkey "Lahmakun"
Izimpawu ezingekho-ezisobala zokuguga, ezinikeza iminyaka yobudala besifazane (Indlela yokuzifihla)
Ungakugeza kanjani izitsha ku-daishisher?